१०५३ सट्टा शिक्षकको जागिर धरापमा !! माघ महिनासम्मको तलब दिएर विदा गर्ने निर्णय – Online Bichar
१०५३ सट्टा शिक्षकको जागिर धरापमा !! माघ महिनासम्मको तलब दिएर विदा गर्ने निर्णय
Online Bichar 21st February, 2019, Thursday 12:03 PM
काठमाडौं, ९ फागुन । स्रोतव्यक्तिको दरबन्दीमा नियुक्त सट्टा शिक्षकको जागिर धरापमा परेको छ । सरकारले स्रोतव्यक्तिलाई साविकको दरबन्दीमा काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि सट्टा शिक्षकको भविष्य अन्यौलमा परेको हो ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको परिपत्रमा लेखिएको छ, ‘स्रोतव्यक्तिको सट्टामा कार्यरत शिक्षक र अस्थायी स्रोतव्यक्तिहरुलाई अवकास दिने । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको नियमानुसार पाउने तलब भत्ता एकिन गरी माग गर्ने । उ क्त विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी निजहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रवन्ध मिलाइने छ ।’